ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ ရှေးဟောင်း အထင်ကရ ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သော နန်းမြိုင် ဟိုတယ်၏ နှစ်ရာပြည့်ပွဲေ - Yangon Media Group
ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ ရှေးဟောင်း အထင်ကရ ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သော နန်းမြိုင် ဟိုတယ်၏ နှစ်ရာပြည့်ပွဲေ
ပြင်ဦးလွင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅
၁၉၁၈ ခုနှစ်က တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် နန်းမြိုင်ဟိုတယ် နှစ် (၁ဝဝ) ပြည့်ပွဲတော်ကို မတ် ၁ ရက်မှ ဧပြီ ၃ဝ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်ဦးလွင်မြို့ နန်းမြိုင်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် နန်းမြိုင်ဟိုတယ် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦး ဌေးအောင်က နန်းမြိုင်ဟိုတယ်သမိုင်းအကျဉ်းအား ပြောကြား၍ မတ်လ ၁ ရက်မှ ဧပြီ ၃ဝ ရက်ထိ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတို့တွင် ဂီတပွဲများအပါအဝင် ရှေးဟောင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများပြသခြင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာစားစရာများ၊ မီးထွန်းပွဲများ၊ ရေကူးပြိုင်ပွဲ၊ စာပေဟော ပြောပွဲ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲ၊ ပန်းချီပန်း ပုပြပွဲပြိုင်ပွဲ၊ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများ ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ”နှစ်တစ်ရာပြည့်တက်ရောက်ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်နဲ့ အနုပညာသမားတွေ၊ နန်း မြိုင်နဲ့အနုပညာသမားတွေကခွဲလို့ မရဘူး။ ရုပ်ရှင်နှစ်တစ်ရာပြည့်က ၂ဝ၂ဝမှာ ပြည့်တော့မှာမို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ စုဆောင်းထားတာ တော့ ရှေးဟောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တွေကို ဒီမှာလာရောက်ပြသပေးသွားမှာပါ”ဟု ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လူမင်းက ပြောကြားသည်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ဥရောပဆန်သည့် တောင်ပေါ်စခန်းမြို့အဖြစ် အင်္ဂလိပ်တို့ကတည်ထောင်ခဲ့ရာဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ဥရောပတိုက်သားများ၊ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများ လာရောက် နေထိုင်တည်းခိုကြပြီး ဥရောပဆန် သော အဆောက်အအုံများနှင့် ယခင်က Craddok Court ဟု ခေါ်သည့် နန်းမြိုင်ဟိုတယ်နှင့် နန်းမြိုင်လမ်းတွင် ယနေ့အထိအကောင်းပကတိ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခု နန်းမြိုင်ဟိုတယ်ကို ၁၉၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယဘုရင်ခံ Sir Reginald H.Craddok လက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ကြောင့် Craddok Court ဟု အမည်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပန်းချီ နေကိုးနေ၏ ပုထုဇဉ်ရွာ အမည်ရှိ တစ်ကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲ ကျင်းပ
အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဒေသထွက် ကုန်ပစ္စည်းများပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲ ကျင်းပ
မုံရွာ မြို့တော်ခန်းမကို ပြည်သူများ အသုံးပြုရန် ငှားရမ်းခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင် ငွေကျပ် သ?
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များထံသို့ ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးသဝဏ်လွှာ ?
Cobra Gold 2018 စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အမေရိကန်နှင့် ထိုင်းတို့ စီမံကိန်း ချမှတ်ဆောင်ရွက်
သင်္ကြန်နားနီးချိန် မန်းကျောက်စိမ်းဈေးကွက် တရုတ်ဝယ်လက်နှင့် ပြည်တွင်းကုန်သည်များ များပြာ??